प्यारो नुवाकोट सलाम छ – Sourya Online
प्यारो नुवाकोट सलाम छ
सौर्य अनलाइन २०७० असोज ५ गते २३:१७ मा प्रकाशित
अति नै मनमोहक नुवाकोट । साह्रै सुन्दर बस्ती नुवाकोट । हार्मोनियमको रिटजस्तो मिलेर बसेका जात/जातिको र आदिवासी जनजातिको बस्ती भएको नुवाकोट । । त्यसैले प्यारो छौ तिमी नुवाकोट, सलाम छ ! तिमीलाई, सलाम छ !!
किनभने प्राकृतिक सुन्दर छटाले भरपूर नुवाकोट यसका अतिरिक्त नौ वटा किल्लाहरू विगतमा निर्माण भएकोले नौकोतबाट नुवाकोट हुन गएकोमा ऐतिहासिक गौरवको थलो नुवाकोट । अर्को पक्ष उच्च जातीय अहंकारी र स्थानीय जातीय अहंकारीलाई चोटिलो प्रहार लगातार चटाइरहेको तिमी नुवाकोट महान् छौ । तिमी नुवाकोट हावा खान, घुमफिर गर्न, रमाइलो गर्न यो पंक्तिकार पुगेको होइन, विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत हामी पुगेका हौँ ।
पार्टीको जनसम्बन्ध कार्यक्रमअन्तर्गत हाम्रो टोली साउन १३ गतेदेखि नुवाकोटको क्षेत्र नम्बर १ को कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यस कार्यक्रमको विधिवत उद्घाटन १४ गते त्रिशूली बजारमा निर्मित सहिद स्मृति भवनबाट शुभारम्भ हुन गयो । यस पश्चात् हामीले झोली तुम्बी बोकेर क्षेत्र नम्बर १ मा पर्ने २० वटा गाविसका खोला खोल्सा, खेतबारीका कान्ला, ढिल हुँदै लगातार ३२ गतेसम्म जनसम्बन्ध कार्यक्रमलाई सबलतापूर्वक अगाडि बढाइ रह्यौं । हामी ओखरपौवा भएर एक गते काठमाडौं फर्केका छौं । यो राजनीतिक घुमाइबाट हामीलाई जे जानकारी भयो, त्यो जानकारी सरल रूपमा यसरी वर्णन गर्न उचित हुन जान्छ ।
नुवाकोट जिल्ला तामाङ आदिवासी जनजातिको बाहुल्य रहेको जिल्ला हो । हाम्रो पार्टीको संगठन सञ्चालन विधि अनुसार ताम्सालिङ राज्य समितिको एक प्रमुख जिल्लाको रूपमा मान्नुपर्ने रहेछ । कारण यहाँ यो जिल्ला प्रतिपक्षी दलका वरिष्ठ नेताहरूको जिल्ला रहेछ । यसो भएको कारणले यस जिल्लाको विशेष उल्लेख्य कुराहरू प्नि यहाँ प्राप्त हु नगएको छ । तामाङ जाति, सोझा, सरल र हिम्मती भएकोले सानातिना प्रलोभनमा फसाएर हाम्रा विरोधी दलका नेताहरूले आफ्नो पक्षमा मत खसाली दुरूपयोग गर्दा रहेछन् । यसो हुँदाहुँदै पनि पार्टीको नीति, कार्यक्रम र स्थानीय नेतृत्वको सक्रियताको कारणले गर्दा यस जिल्लाको दुई सभासद्लाई विजयी गराई संविधानसभाको सभासद् बनाउन सफल भएका रहेछन् । यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले तीनैवटा सभासद्को सिट हाम्रो पार्टीको पक्षमा ल्याउन २० वटै गाविसमा लगातार अभियान सञ्चालन गर्‍यौँ । यसका अतिरिक्त तीन र दुई क्षेत्रमा पनि हाम्रा साथीहरूको नेतृत्वमा अभियान सञ्चालन भयो । श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र पंक्तिकार क्षेत्र नम्बर एकमा मेहनत पूर्वक जिल्लाका नेतृत्वदायी साथीहरूसँग राजनीतिक ठोस कार्यक्रमका साथ जनसम्बन्धलाई साकार रूप दिने काम गर्‍यौँ ।
यथास्थितिवादी र प्रतिगमनकारी तत्व र पार्टीहरूले अनर्गल प्रचार प्रशस्त मात्रामा जिल्लाभर गरिरहेका रहेछन् । विकासका आधारभूत कार्य सबै ठूलाठालु भनाउँदा नेताको निगाहाबाट सम्पन्न भएका हुन् र नुवाकोट जिल्लालाई भावी दिनमा स्वर्गकै टुक्रा बनाउँछौँ भनी जनतालाई झुक्याउने प्रपञ्चकारी कुराकन्थ व्यापक रूपमा प्रचार भएको पाइयो । यसै सिलसिलामा मेरो प्यारो वृद्ध मित्र बलराम फुँयालले राम्ररी नै बुँदागत रूपमा त्यस्ता तत्वका सवाललाई जवाफ दिनुभयो । २० वटै गाविसमा उहाँको ठोस जवाफ, सारगर्वित कुरोले त्यस क्षेत्रका आम जनता स्पष्ट हुने मौका समेत प्राप्त हुन गयो । यसका साथै पाका र युवा नेताहरूबाट प्रचूरमात्रामा ती जनविरोधी तत्वहरूको कुटिल चालाको भण्डाफोर गर्ने काम पनि स्पष्ट ढंगले हुन गयो । अर्को पक्ष नेतागण निर्वाचनमा विजयी भएर काठमाडौं छिरेपछि गाउँघर नफर्किएको गुनासोलाई पनि उचित ढंगले नै चित्त बुझाउने काम भयो ।
आम जनताको दु:खेसो र आक्रोश गाउँघरमा चुलिएको रहेछ । पार्टीहरूले केही काम गरेनन्, आज कल त नेताहरू गाउँ–घर आउनै छाडिसकेका छन् । यिनै थिए, प्रमुख जनगुनासो । कतिपय पढेलेखेका गाउँलेहरू त भन्ने गर्थे, होइन संविधान बन्न सक्छ र ? किनभने पहिले पनि संविधान बनाउने भनिकन भोट मागी तपाईंकै पार्टीलाई एक नम्बरको बनाएर पठाएका हौं, संविधान बनाउनु सट्टा तपाईंहरू आपसमा फुटेर झन् बर्बाद बनाउन लागिरहनुभएको छ । जनतालाई धोका दिने कामबाहेक तपाईंहरूले कुनै काम गर्न सक्नुभएको छैन । अब पनि पुन: चुनावको कुरोले हामी चकित बनेका छौँ । यही प्रश्नको बीचबाट हामीले २० वटै गाविसका भेटघाटमा उत्तर दिने काम सरल ढंगले गर्‍यौं । हामीले भन्यौं कि तपाईंहरूको भनाइ उचित छ ।
नेपाली जनता आमूल परिवर्तन चाहन्छन् । यसमा हामीले नेतृत्वबाट तल–माथि परेकोमा क्षमा चाहन्छौं । तैपनि, हाम्रो पार्टीको मात्र संविधान बनाउने जिम्मेवारी थिएन । चार वर्षको समय खेर गएकै हो । यसका अतिरिक्त नेपाली जनताको धनराशि पनि क्षति भएकै हो । हाम्रो पार्टी पनि फुटेकै हो । तर, वैद्यजी हाम्रो गुरु हुन्, नेता हुन् र उहाँले पनि संविधानसभामार्फत् नेपाली जनताको संविधान दिनेछौं भनी प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएकै हो । पार्टी फुटेर गए पनि संविधान बनाउने कुरामा कुनै पनि तल–माथिको छलफल र बहस हुन नसक्दैन । उहाँहरू पनि यो संविधानसभाको चुनावमा पुन: भाग लिएर नेपाली जनतालाई पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान व्यवस्थित रूपमा तर्जुमा गर्ने विषयमा लाग्नुहुनेछ, योभन्दा पर गएर तत्कालीन समयको क्रान्तिकारी कदम अरु हुन सक्दैन । दोस्रो कुरा बाह्रबुँदे सहमतिले के भन्छ भने पूँजीवादी शक्ति र साम्यवादी शक्ति एक साथ अगाडि बढेर जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र केही हद सीमित मात्रामा भए पनि वर्गीय मुद्दालाई एक साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सहमति थियो । यही बाह्र बुँदेको आधारमा चार वर्षसम्म संविधान निर्माणको छलफल चलाइरहँदा दुईटा बुँदामा सहमत हुन नसक्दा प्रथम संविधानसभा दु:खद् अवसान हुन पुग्यो । त्यसकारण संघीयता र शासकीय स्वरूपबारे अल्झो लाग्दा पुन: चुनावी मैदानमा नेपाल उत्रन परेको विषयलाई उजागर गर्दै गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीको चित्त बुझाउने काम गरियो । यसबीचमा हाम्रो पार्टीका स्थानीय नेता र कार्यकर्ताको चाहना पनि कम रहेनछ । उहाँहरू आमूल परिवर्तनको पक्षमा खडा भएका रहेछन् । नेतृत्व भने अलमलिरहेको छ कि भनी अन्तरकुन्तरदिलमा लुकिबसेको रहेछ । सो कुरा पनि छलफलको क्रममा जानकारीमा आयो । आमूल परिवर्तन इच्छाबाट हुन सक्दैन । किनभने समय परिवेशको यथार्थ घेरालाई नाघेर इतिहास निर्माण हुननसक्ने कुरा हामीले छलफलमा घनिभूत रूपमा चलायौं । यसको परिणाम आगामी संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले उजागर गर्ने नै छ । आमकार्यकर्ताको क्रान्तिकारी भावना, विचारलाई पार्टीले आत्मसात् गरेको कुरा हामीबाट बुझबुझारत गर्ने काम भयो ।
अन्तमा नुवाकोटलाई किन आत्मीय सलाम छ भने परम्परागत समाजवादी संस्कृतिले ओतप्रोत भएको एक विकसित समाजले बनेको नुवाकोट जिल्ला हो । दोस्रो कुरा जे–जति नै विचारले रिमोल्लिरहेको गाउँघर भए तापनि सही सलामतका कुराकानीबाट चाँडै चित्त बुझाउने नुवाकोटबासी भएकाले पुन: नुवाकोट तिमीलाई सलाम छ !